Ungambiza njani umntu ophethe iTricolor TV? | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Ungatsalela umnxeba iziko lonxibelelwano lenkampani yeTricolor TV ngokubiza umnxeba ngenkxaso, kukhangeleka ngathi: 8 (812) 332-34-98. Le nombolo ikuvumela ukuba ufumanise ulwazi lomdla, yeyiphi imeko kwiakhawunti, zeziphi iinkonzo ezixhunyiwe.
Malunga nonyaka odlulileyo, ndaxhuma i-tricolor. Kukho into eyenzekileyo kunye ne-tricolor eyekile ukusebenza. Ndifuna ifowuni ngokungxamisekileyo.
Ndaya kwisiza apho iifowuni ndingakhange ndizifumane ngenxa yesizathu esithile.
ifunyenwe kwi-Intanethi umnxeba oshushu we-8-800-500-01-23
Ndifumene nefowuni ehlawulelweyo 8-812-332-34-98
Kwaye yonke into yagqitywa kwiakhawunti yakhe.
Umqhubi wokusebenza: Tricolor TVquot; Kulula ukubiza nayiphi na imicimbi enomdla kuyo, ngelixa kungekho kuphela umnxeba, kodwa neSkype kunye ne-imeyile.
Ukuba ufuna ukuba ngumnikeli we-Qu; Tricolor TVquot ;, ifowuni yile ilandelayo: 8-800-500-01-23.
Ukuba sele ubhalisile: 8-812-332-34-98.
Nantsi ikhonkco kwinkonzo yenkxaso yale nkampani.
Ungatsalela umnxeba umphathi weTricolor TV ngeendlela ezininzi. Okokuqala, thatha ithuba lokunxulumana ngenombolo yefowuni:
Ewe kunjalo, ukuba lo mnxeba mde awukufanelanga, kuba kuya kufuneka uhlawule amatyala ongezelelweyo, angafunekiyo, ke uye ku Tricolor TV iwebhusayithi, kwicala lasekhohlo lesikrini kukho iqhosha lesicatshulwa; Uncedo lwenkonzo enobumbano;
Sinqakraza kuyo, khetha indlela yonxibelelwano, umzekelo, ukusebenzisa iSkype, kwaye ingxaki isonjululwe.
Ngelishwa, i-Tricolor ayinayo i-hotline yasimahla. Kukho inombolo yeSt. Petersburg inombolo 8 (812) 332-34-98, umnxeba. Ukuba unayo i-Quo; I-Channelquot eneekhowudi; Ukuba i-quot; ibonisa akukho ntelekelelo;; qala uluhlu lomzila. Ukuba ayincedi kwaye akukho nqanaba lomqondiso, ungazama ukuhambisa i-eriyali. Kwaye umphathi weTricolor akancedi kangako, uqinisekisiwe.
Ungatsalela umnxeba iziko lonxibelelwano laseTricolor TV ngokutsala kwi-8 (812) 332-34-98, ngale nombolo unokufumana ulwazi malunga nenqanaba leakhawunti yakho kunye neenkonzo ezikhoyo. Ukwenza naliphi na inyathelo, kuya kufuneka ulungele ukuxelela umqhubi wenombolo yomamkeli wakho kunye negama lomntu obonisiweyo xa ubhalisa izixhobo ...
Ungatsalela umnxeba kwinombolo yasimahla ye-Tricolor 8-800-500-01-23, ukuba ufuna ukuba ubhalisile, ukuba sele ubhalisile kufuneka ufowunele u-8-812-332-34-98, ungatsalela umnxeba nge-Skype - inkxaso_tricolor_tv
Nxibelelana nenkonzo yabathengi quot; Tricolor TVquot;, ukuba sele ungomnye, ungatsalela umnxeba kwi-8-812-332-34-98. Kuya kuthathelwa ingqalelo kuphela ukuba iindleko zomnxeba aziyi kuba zincinci, kuba ukutshaja kuqhutywa ngokuhamba umgama omde ukuya eSt. Kodwa kukho ithuba lokufowuna kwi-Skype (jonga ulwazi apha).
Ukutsala umnxeba kwi-Tricolor TV, kufuneka ucofe inombolo yeefowuni ezilandelayo: 8-800-50-001-23 simahla 8-812-332-34-98 ihlawulwe.
Kodwa kuya kufuneka uyazi ukuba ungabiza inombolo engahlawulelwayo kuphela kwabo bantu bangengobabhalisi be-Qu; Tricolor TVquot ;.
Kwaye ukuba sele ubhalisile ukuba uyicaphule; I-Tricolor TVquot ;, ke kuya kufuneka ukuba ubize inombolo ehlawulweyo.
Ukusukela nge-23 kaMeyi ngo-2011 kubekho iinguqu ezinkulu kwindawo yenkxaso yeTricolor TV. Ngoku, ukoneliseka kwababhalisile, inani liya kuba liqhelekileyo kwaye lihlangane 8 812 332-34-98 eyokuqala iya kuvalwa.Uya kuhlawulelwa ukubiza le nombolo ngokwe-opharetha yakho.
Imibuzo ye-22 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-0,293.